Organisation: Movement for Democratic Change
Opposition gets finance ministry in unity government
ZIMBABWEAN opposition leader Morgan Tsvangirai yesterday appointed Tendai Biti to be finance minister in a unity government with President Robert Mugabe.
Zimbabwe watches as uneasy government truce begins
Zimbabwe opposition leader Morgan Tsvangirai will become prime minister tomorrow as part of a power-sharing agreement with president Robert Mugabe the country hopes will help solve its growing crisis.
Parliament opens way for Zimbabwe unity government
Zimbabwe’s parliament passed a key constitutional amendment that opens the way for a unity government after years of deadly political conflict.
Opposition to join Zimbabwean unity government
Two members of Zimbabwe’s main opposition party today said it would join a unity government in early February.
Mugabe's jailers release two-year-old-boy, after weeks inside
A boy of two has finally been released from jail in Zimbabwe after being held for weeks with his parents who face political charges.
ZIMBABWE’S opposition MDC insisted yesterday an “equitable” sharing of powerful ministries and the resolution of other outstanding political issues were key to the formation of a unity government.
Missing Mugabe opponent appears in court
A Zimbabwean human rights activist missing for three weeks suddenly appeared in court today accused of plotting to overthrow President Robert Mugabe.
Mugabe: We have solved cholera problem
Zimbabwe’s leader Robert Mugabe dealt with his country’s growing cholera epidemic crisis today by declaring it did not exist.
Cholera death toll reaches 775 in Zimbabwe
The death toll from Zimbabwe’s cholera outbreak has risen sharply, the United Nations said, reporting 775 deaths and 16,141 cases of the waterborne disease in the southern African nation.
'Hugging Saint' in line for peace prize
An Indian spiritual teacher known as “the Hugging Saint” is in the running for the Tipperary Peace Prize, it emerged today.
Zimbabwe deal in doubt as Mugabe chooses key ministries
Zimbabwe’s President Robert Mugabe has chosen key ministries for his own party to control in a new government, according to the country’s official Herald newspaper.